Bit By Bit - Fametraham-panontaniana - 3.1 Sava lalana
Ireo mpikaroka mandalina feso dia tsy afaka manontany azy ireo ary noho izany dia voatery miezaka mianatra momba ny feso amin'ny fijerena ny fitondrantenany izy ireo. Ireo mpikaroka izay mandalina ny olombelona, ​​etsy ankilany, dia mora kokoa izany: afaka miresaka ireo namaly azy. Ny lahateny amin'ny olona dia ampahany manan-danja amin'ny fikarohana ara-tsosialy taloha, ary manantena aho fa amin'ny hoavy koa izany.
Amin'ny fikarohana ara-tsosialy, ny firesahana amin'ny olona amin'ny ankapobeny dia maka endrika roa: fanadihadiana sy fanadihadiana lalina. Amin'ny fitenenana am-pilaminana, ny fikarohana amin'ny fampiasana fanadihadiana dia mitaky rafitra fisorohana marobe amin'ireo mpandray anjara marobe, ireo fanontaniana manara-penitra, ary ny fomba fampiasana statistika mba hampitomboana ny mpandray anjara amin'ny vahoaka be. Ny fikarohana amin'ny alalan'ireo fanadihadiana lalindalina kokoa, amin'ny ankilany dia midika fa mpandray anjara maromaro, resadresaka semi-structured, ary vokatr'ireo mpandray anjara manan-karena. Ny fanadihadiana sy ny dinidinika lalina dia sady fomba goavana no misy, fa ny fanadihadiana dia misy fiantraikany bebe kokoa amin'ny fiovan'ny toetr'andro amin'ny alàlan'ny dizitaly. Noho izany, ato amin'ity toko ity, hifantoka amin'ny fikarohana momba ny fanadihadiana aho.
Araka ny asehoko ato amin'ity toko ity, ny taona nomerika dia mamorona fahafahana mahafinaritra ho an'ireo mpikaroka mpanadihady mba hanangona tahirinam-bola haingana sy mora, hametraka fanontaniana isan-karazany, ary hampitombo ny sandan'ny fanadihadiana amin'ny angona lehibe. Ny hevitra hoe ny fikarohana momba ny fanadihadiana dia mety hiova amin'ny fiovan'ny teknôlôjia dia tsy vaovao, na izany aza. Nanodidina ny taona 1970, nisy fiovàna toy izany no nateraky ny teknolojian'ny fifandraisana samihafa: ny finday. Soa ihany, ny fahatakarana ny fomba fiovaovan'ny telefaonina dia afaka manampy antsika haka sary an-tsaina hoe ahoana no hanovana ny fanadihadiana ny fanadihadiana.
Ny fikarohana momba ny fanadihadiana, araka ny ahafantarantsika azy anio, dia nanomboka tamin'ny taona 1930. Nandritra ny vanim-potoana fikarohana momba ny fanadihadiana, ireo mpikaroka dia hanonona ny faritra ara-jeografika (toy ny tanàna) ary avy eo dia mandeha any amin'ireny faritra ireny mba hahitana fifampiresahana mivantana amin'ny olona ao an-tokantrano. Avy eo, ny fandrosoana teknolojia - ny fanelezana goavana an-tariby an-tariby tany amin'ny firenena manankarena - dia nitarika ho amin'ny vanim-potoana fanadihadiana faharoa. Io vanim-potoana faharoa io dia samy hafa ny fomba naha-samihafa ny olona sy ny fomba fifampiresahana. Tamin'ny vanim-potoana faharoa, fa tsy naka an-tariby ny tokantrano tany amin'ny faritra ara-jeografika, ny mpikaroka dia naka an-tsarimihetsika nomeraon-telefaona tamin'ny fomba fitsaboana antsoina hoe random-chif . Ary raha tokony handehanana hifampiresaka amin'ny olona izy ireo dia miantso azy ireo amin'ny telefaonina ny mpikaroka. Mety ho toy ny fiovan'ny lojistika madinika ireny, saingy nanao fikarohana haingana kokoa, mora kokoa, ary mora kokoa izy ireo. Ankoatra ny fanomezan-danja ny fiovàna, dia niadian-kevitra ihany koa ireo fiovana ireo satria maro ireo mpikaroka no nihevitra fa mety hampiditra fomba maro samihafa ireo fanadihadiana vaovao sy ireo fanadihadiana. Tamin'ny farany anefa, taorian'ny asa be dia be, ny mpikaroka dia nanazava ny fomba hanangonana ny angon-drakitra azo ampiasaina amin'ny alalan'ny antso an-tariby sy fifampiresahana an-tariby. Noho izany, amin'ny fanamafisana ny fomba hahombiazan'ny fampiasana fitaovana ara-teknolojia eo amin'ny fiaraha-monina, dia afaka nanavao ny fomba fijerin'izy ireo ny fikarohana ireo mpikaroka.
Amin'izao fotoana izao, ny fampandrosoana teknolojia iray - ny vanim-potoana nomerika - dia hitondra antsika amin'ny vanim-potoana fahatelo amin'ny fikarohana. Ity tetezamita ity dia ampahany amin'ny alàlan'ny famotehana tsikelikely ny fomba fijery faharoa (BD Meyer, Mok, and Sullivan 2015) . Ohatra, noho ny antony maro samihafa ara-teknolojika sy ara-tsosialy, ny tahan'ny tsy fitongilanana-izany hoe, ny ampahany amin'ny olona sampled izay tsy mandray anjara amin'ny fanadihadiana-dia nitombo nandritra ny taona maro (National Research Council 2013) . Ireo fironana maharitra ireo dia midika fa ny tahan'ny tsy fitongilanana dia mety hihoatra ny 90% amin'ny fanadihadiana an-tariby (Kohut et al. 2012) .
Etsy andaniny, ny fifindrana amin'ny vanim-potoana fahatelo koa dia voatery mizara ampahany vaovao mahafinaritra, izay sasantsasany izay hilazako ato amin'ity toko ity. Na dia mbola tsy voavaly aza ny zava-drehetra, dia manantena aho fa ny fizarana fahatelo amin'ny fikarohana dia hanamarina ny fakan-tsarimihetsika tsy mahazatra, ny resadresaka amin'ny ordinatera ary ny fifandraisana amin'ny loharanom-baovao lehibe (tabilao 3.1).
Tabilao 3.1: Fikarohana momba ny fanadihadiana telo ery ambany amin'ny Groves (2011)
Ny vanim-potoana voalohany Fahaiza-mamaritra ny faritra Mifanatrika Fijerena samirery irery
Faharoa faharoa Zava-mitranga maromaro (RDD) azo tsindriana Telephone Fijerena samirery irery
Fahatelo fahatelo Ny tsy fahombiazan'ny famandrihana Computer-angoninay Fanadihadiana mifandraika amin'ny loharano lehibe
Ny tetezamita teo amin'ny fikarohana momba ny fanadihadiana faharoa sy fahatelo dia tsy nahitam-peo tanteraka, ary nisy adihevitra mafotaka momba ny tokony hivoahan'ny mpikaroka. Rehefa mijery ny fifindrana teo amin'ny vanim-potoana voalohany sy faharoa, mieritreritra aho fa misy ny fanalahidy iray ho antsika amin'izao fotoana izao: ny fiandohana dia tsy ny fiafarana . Izany hoe, ny fomba amam-pitsaboana maro amin'ny ambaratonga voalohany dia ad hoc ary tsy dia nahomby loatra. Niasa mafy anefa ireo mpikaroka, rehefa niasa mafy. Ohatra, ireo mpikaroka dia nanao antso an-tariby tsindraindray nandritra ny taona maromaro talohan'i Warren Mitofsky sy Joseph Waksberg dia namolavola fomba fomban-tsisim-peo mahazatra maromaro izay manana toetra azo tsapain-tanana sy ara-toekarena (Waksberg 1978; ??? ) . Noho izany, tsy tokony hanakorontana ny toe-pahasalaman'ny vanim-potoana fahatelo amin'izao fotoana izao isika miaraka amin'ireo vokatra farany.
Ny tantaran'ny fanadihadiana dia maneho fa ny sehatra dia mivoatra, tarihan'ny fiovan'ny teknolojia sy ny fiarahamonina. Tsy misy fomba hanakanana izany evolisiona izany. Tokony hanaiky izany isika, ary hanohy hianatra fahendrena avy amin'ny fiandohan'ny taloha, ary izany no fomba handraisako ato amin'ity toko ity. Voalohany aloha dia hanamafy aho fa ny loharanom-baovao lehibe dia tsy hanolo ny fanadihadiana ary ny fitomboan'ny loharanom-baovao lehibe dia mitombo - tsy mihena - ny lanjan'ny fanadihadiana (fizarana 3.2). Raha raisina izany fanentanana izany dia hamintina ny rafitra fanadihadiana tanteraka (fizarana 3.3) izay novolavolaina nandritra ny roa taona nanaovana fanadihadiana. Ity rafitra ity dia ahafahantsika mahafantatra fomba vaovao ahafahana misolo tena-indrindra fa ny tsy fahombiazan'ny santionany (fizarana 3.4) - sy ny fomba vaovao handrefesana-indrindra ireo fomba vaovao entina hametrahana fanontaniana ho an'ny mpanadihady (fizarana 3.5). Farany, hamaritra tetikasa fikarohana roa aho hampifandraisana ny angona fanadihadiana amin'ny loharanom-baovao lehibe (fizarana 3.6).